IAlumina Silica Refractory Brick abavelisi kunye nabaxhasi - China Alumina Silica Refractory Brick Factory
Izitena ezikhethekileyo zealuminium zenziwe ngebanga eliphezulu le-sillimanite, i-pyrite, i-mullite, kunye ne-corundum njengezinto ezisetyenzisiweyo, kwaye zine-Refractoriness ye-1750 ~ 1790℃. Phakathi kwabo, i-Al2O3 iphezulu, kwaye ubungakanani bokungcola buncinci, kwaye ukuyilwa kweglasi yefusible incinci. Ke ngoko, ubushushu obuthambisa umthwalo buphezulu kunobo bezitena zodongwe. Izitena ezikhethekileyo zealumina ziqulathe ii-Al2O3 ezingaphezulu, ezikufutshane nezinto zokwakha ezingathathi hlangothi kwaye zinokuxhathisa ukhukuliseko lwe-slag ye-acid kunye ne-alkaline slag.
Izitena alumina High yi alumina silicate izinto eliyinjubaqa, apho umxholo alumina idlula 55%, kwaye calcined ukusuka umxholo alumina izinto ekrwada. Inokumelana nobushushu obuphezulu kunye nokumelana nobushushu obuphezulu nge-1770 ° C nangaphezulu. Izitena eziphakamileyo ze-alumina zinokuxhathisa okuhle kwe-slag kwaye ubukhulu becala zisetyenziselwa ulwakhiwo lombane wentsimbi, iifanitshala zeglasi, iifanitshala zesamente ezijikelezayo, njl.
Izitena zomlilo zenziwe nge-50% yodongwe oluthambileyo kunye ne-50% yodongwe olomeleleyo, oludityaniswa ngokweemfuno ezithile zobungakanani bamasuntswana. Emva kokubumba kunye nokomisa, badutyulwa kubushushu obuphezulu be-1300～1400℃. Izitena zeFireclay ziyimveliso etyhidiweyo engenamandla, enokuthintela ukhukuliseko lwe-asidi ene-asidi kunye negesi ene-asidi, kwaye inokunganyangeki kancinci kwizinto ze-alkaline, ukusebenza kakuhle kwe-thermal, kunye nokumelana nokubanda okukhawulezileyo kunye nobushushu.
Izitena zeFireclay yenye yeendidi eziphambili zeemveliso zoluhlu lwe-silica-alumina. Zizinto ezikhutshiweyo ezinomxholo we-30-48% we-Al2O3 owenziwe ngodongwe olucekeceke njengoludibeneyo kunye nodongwe olukhanyelayo njengebinder.
Umxholo we-alumina wezitena ze-corundum ungaphezulu kwe-90% kwaye isigaba se-crystal esiphambili yi-corundum. Inamandla okucinezeleka aphezulu kubushushu begumbi (ukuya kuthi ga kwi-340MPa), umthwalo omkhulu wokuthomalalisa ubushushu (ngaphezulu kwe-1700 ℃), uzinzo lweekhemikhali olulungileyo, kunye nokuxhathisa okuqinileyo kwi-acidic okanye i-alkaline slag, isinyithi kunye neglasi etyhidiweyo, njl.
Uzinzo lomothuko onxulumene nobushushu luhambelana nolwakhiwo lwalo, kunye nokumelana neemveliso ezixineneyo kulungile. Kukho iindidi ezimbini zezitena zekorundum ezenziwe ngesamente kunye nezitena ezihlanganisiweyo. I-sintered alumina kunye ne-fond corundum inokusetyenziswa njengempahla ekrwada, okanye i-bauxite clinker ene-Al2O3 / SiO2 ephezulu enokudityaniswa ne-alumina ene-sintered kwaye yenziwa ngendlela ye-sintering. I-Phosphoric acid okanye ezinye iiarhente zokubopha zingasetyenziselwa ukwenza izitena ze-corundum ezingacimiyo.
Isitena seSilica sisixhobo esichasayo esine-asidi esichasayo. Iqondo lobushushu elithambileyo lesitena se-silica phantsi komthwalo liphezulu njenge-1640 ~ 1670 ° C, umthamo uzinzile kubushushu obuphezulu, kwaye unokusetyenziselwa ixesha elide.
Isixhobo esine-asidi esichasayo ikakhulu esenziwe nge-tridymite, cristobalite kunye nenani elincinci le-quartz yentsalela kunye nenqanaba leglasi. Umxholo we-silicon dioxide ungaphezulu kwe-94%, uxinano oluyinyani yi-2.35g / cm3, inokuchasana nokhukuliseko lwe-acid slag kunye namandla aphezulu obushushu. Ayizukukhubazeka emva kokusetyenziswa kwexesha elide kubushushu obuphezulu. Uzinzo olothusayo olushushu (1 ~ 4 amaxesha otshintshiselwano ngobushushu emanzini) I-silica yendalo isetyenziswa njengempahla eluhlaza, kwaye inani elifanelekileyo le-mineralizer longezwa ukukhuthaza ukuguqulwa kwe-quartz emzimbeni ube yi-tridymite. Icothwe kancinci nge-1350 ~ 1430 ℃ phantsi kokunciphisa umoya. Xa ushushu ukuya ku-1450 ℃, kuyakubakho malunga ne-1.5 ~ 2.2% yolwandiso lwevolumu iyonke. Olu lwando luyintsalela luyakwenza ukuba amalungu asikiweyo asondele kwaye aqinisekise ukuba ulwakhiwo lunokuqina komoya kunye namandla omzimba.